Isticmaalka Aalkolada Xilliga Uurka
Bixiyeyaashaada Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka waxay kaa codsanayaan inaad ka fogaato dhammaan aalkolada isticmaalkeeda haddii aad isku dayeyso inaad uur yeelato, haddii aad uur leedahay, ama haddii aad naas nuujiso.
Calaamadaha Alkolada ee Uurka
Cudurka khamriga ee uurjiifka waa natiijo toos ah oo khamri cabista inta lagu guda jiro uurka waana sababta ugu weyn ee looga hor tagi karo dib u dhaca maskaxda. Dhibaatooyinka kale ee xun waxaa ka mid ah cilladaha wajiga, dhererka oo yaraaday, kacsanaanta, dhibaatooyinka xagga barashada, feejignaanta, xusuusta, xallinta dhibaatooyinka, isku-duwidda liidata, dhiirrigelinta, iyo hadalka iyo maqal la'aanta ku sii socota qaan-gaarnimada iyo qaan-gaarnimada.
Qofna ma oga haddii ay jirto marin ka hooseeya aalkolo la cabi karo iyadoo aan waxyeello uurjiifka lahayn. Tan darteed, waxaan kugula talineynaa in haweenka uurka leh iyo kuwa naas nuujinaya ay ka fogaadaan isticmaalka aalkolada, inta laga xaqiijinayo doorka khamriga ee horumarka uurjiifka.
Dr. Kevin Hackett Dr. Carrie Soder Dr. Lauren Sagaria Dr. Amy W. Rahl Dr. Ann Marie Wurst Dr. Alexandra Schueler Dr. Erika Boothman Dr. Joanna Buell Goobta Columbus Goobta Westerville Goobta Dublin Guudmarka Uurka Nafaqada & Jimicsiga